Midowga Yurub oo malaayiin euro ku bixinaya barnaamij lagu taageerayo qaxootiga ku nool Turkiga (Waxyaabaha ay ka faa’iidayaan?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Midowga Yurub oo malaayiin euro ku bixinaya barnaamij lagu taageerayo qaxootiga ku...
(Ankara) 01 Okt 2020 – Midowga Yurub ayaa malaayiin badan oo euro ku bixinaya mashaariic lagu hormarinayo qaxootiga ku sugan dalka Turkiga, sida uu sheegay Nikolaus Meyer-Landrut.
MY ayaa soo gudbiyey 5 qandaraas oo ay wada galeen iyaga, Baanka Adduunka iyo dalka Turkiga, kaasoo ah mashaariic lagu kharash garaynayo adduunyo dhan 393 milyan oo euro ($460 milyan oo doollar), oo la marinayo hay’adda Facility for Refugees in Turkey (FRIT), si qaxootiga looga taageero inay sameeyaan dhexgal bulsho iyo mid dhaqaale.
Mashruuca ayaa looga gol leeyahay in lagu kobciyo awoodda iyo mugga qaxootiga isla markaana waxaa lagu sahlayaa sidii ay galaangal ula yeelan lahaayeen suuqa shaqada.
Waxaa sidoo kale qaxootiga looga taageerayaa in ay bartaan af Turkish-ka iyo inay helaan lacago taageero ah, waxaa sidoo kale lacagta qaar lagu hormarin doonaa maamullada dowladaha hoose ee gobollada Koonfur Bari ee Turkey.
Mashruucan oo soo socdey ilaa 2016-kii looguna tala galay in lagu wanaajiyo tayada nololeed ee qaxootiga, gaar ahaan kuwa Suuriya, ayaa guud ahaan lagu bixinayaa 6 bilyan oo euro, waxaana shuruudaha ka mid ah inay Turkigu celiyaan qaxootiga kusoo baxaya sharci darrada ee soo gelaya Midowga Yurub.
Previous articleRASMI: AC Milan oo la saxiixatay ”Kaka-ha Norway” & lambarka uu qaatay + Sawirro
Next articleQaxootigii ugu horreeyey ee uu Jarmanku kasoo qaaday Giriigga oo dalkaa gaarey + Sawirro